७ फोटोमा हेर्नुहोस् होली हंगामा - Nepali Virals
७ फोटोमा हेर्नुहोस् होली हंगामा
९ चैत्र २०७२, मंगलवार १७:३२	339 पटक-पढिएको
रमाइलो र उमंगको पर्व होली आज राजधानीसहित पहाडी जिल्लाहरुमा धुमधामका साथ मनाइदै छ । तराइका जिल्लाहरुमा भने भोलि मनाउने चलन छ । होलीका अबसरमा आज बिभिन्न क्लव तथा पार्टीहरुमा युवायुवतीहरु जमघट भएर रमाईरहेका छन् ।
यसपटक विगत वर्षको तुलनामा अनुशासित देखिएको होली आफ्ना परिचितबीचमा मात्रै खेल्ने दृश्य बढी देखिएको छ । उपत्यकाका महत्वपूर्ण चोकमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी जाँच कडा पारेको छ भने हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधिलाई निगरानी गरेको देखिन्छ । यस वर्ष होलीको उत्साह विगत वर्षको तुलनामा केही कमी आएको देखिएको छ ।
युवापुस्ताले केही रमाइलो गरेको देखिए तापनि आमजनतामा रौनकता छैन । उपत्यकामा सवारीसाधनको उपस्थिति पातलो छ । सवारीसाधनको संख्या निकै पातलो छ ।
होली हिन्दू संस्कृतिमा प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूणिर्मा अर्थात होली पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ । होली खेल्ने दिन भन्दा एक दिन पहिला राती होलीका दहन गरिन्छ । राती होलीका दहन गरिसके पछि बिहान पानीमा रङ्ग घोलेर एक अर्कामाथि फाल्ने चलन छ । सानो सानो नानीहरूदेखि वृद्ध वृद्धा सम्म सबै होलीको मजा गर्छन् ।
युवा-युवतीहरू गीत गाउँदै-नाच्दै होली खेल्छन् । भनिन्छ कि होलीको दिन पुरानो कटुता समाप्त गरेर, दुस्मनी बिर्सेर मान्छे एक-अर्कासित मिल्छन् । यस पर्वलाई फाल्गुणको महिनामा मनाउने यसलाई फगुआ पनि भनिन्छ । होली पर्व घरपरिवार-साथीभाइ आपसमा रङमा रङ्गएिर उल्लासपूर्वक मनाउने फागुन पूणिर्माको अवसरमा पहाडदेखि तराई र गाउँदेखि सहरसम्मका केटाकेटी, युवायुवती तथा प्रौढहरूका हूल तथा जत्थाहरू हातमा रङ र रङ्गीन घोल पदार्थ लिएर गाउँदै, बजाउँदै, रमाइलो र होहल्ला गर्दै आपसी रिसईबीलाई बिर्सेर उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइने रङ्गीन पर्वको रूपमा लिइन्छ ।
फागुन शुक्ल अष्टमीको दिन काठमाडौँको वसन्तपुर दरबार अगाडि चीर-विशेषरूपले सजाएको लिङ्गो गाडेपछि होली सुरू भएको मानिने फागुपर्व पूणिर्माको राति उक्त चीर -लिङ्गोलाई ढालेर जलाएपछि समाप्त हुन्छ ।
कुन राशीका व्यक्तिले कुन रंगसँग होली खेल्ने ?
अघिल्लो कुन राशीका व्यक्तिले कुन रंगसँग होली खेल्ने ?
पछिल्लो भारतले बंगलादेशलाई उडाएको भिडियो भाइरल (हेर्नुस भिडियो)